Unogona kutumira mudhudhudhu kubva kuNew York kuenda kuUnited Kingdom? - Yangu Mota Kunze
Unogona kutumira mudhudhudhu kubva kuNew York kuenda kuUnited Kingdom?
Isu tinogara tichitumira midhudhudhu kubva kuAmerica kuenda kuUnited Kingdom. Kana iwe wagumburwa nebhizinesi redu uchitsvaga nzira yekuendesa mudhudhudhu wako kuenda kuUK saka wave nemhanza.
Yangu Mota Kunze inopa akawanda masevhisi uye isu tiri pano kuzobatsira vanhu vakazvimiririra nehurongwa hwekupinza mota dzavo kuUnited Kingdom.
New York ine imwe yemapareti anozivikanwa nekuda kwenguva pfupi yekuenda kuUK saka usazeze kupinda mukutaurirana kuti chirongwa ichi chitange
Isu tichakutaurira iwe nezvese chiitiko chekutora mudhudhudhu wako pano, wakagadziridzwa, uye wakanyoreswa.